Oko Kufuneka Ukwazi NgeSeneti yase-US
IQumrhu elinye eliLawulayo, i-100 Voices
I-Senate yaseUnited States iyona gumbi eliphezulu kwisebe lezomthetho lo rhu lumente . Kuthathwa njengomzimba onamandla ngakumbi kunecala elingaphansi, iNdlu yabameli .
I-Senate yenziwe ngamalungu angama-100 abizwa ngokuba ngama-senators. Urhulumente ngamnye ulinganiselwe ngokulinganayo amabini-senethi, kungakhathaliseki ukuba ngabahlali babantu. Ngokungafani namalungu eNdlu, abamele imimandla yendawo yesithili kwiindawo, ama-senators abamele lonke ilizwe.
Ama-Senators asebenza ngokujikelezayo amagama aneminyaka emithandathu kwaye aphakanyiswa ngokubanzi ngamalungu abo. Iminyaka emithandathu yeminyaka igxininiswe, kunye neyesithathu kwisithuba sezonyulo kunyaka yonke iminyaka emibini. Amagama agxininiswe ngendlela enokuthi i-senate izihlalo ezivela kuyo nayiphi na imeko ayinakuphikisana nolu khetho olufanayo, ngaphandle kokuba kuyimfuneko ukuzalisa isithuba .
Ngaphambi kokumiselwa koLungiso lweShumi elinesibhozo ngo-1913, abaphathi bee-senators bamiselwa ngamalungu omthetho kazwelonke, kunokuba banyulwe ngabantu.
I-Senate iqhuba ibhishini layo elisemantla e-North Capitol Building, eWashington, DC
I-Head of Senate
I- Vice-Mongameli we-United States ilawula i-Senate kwaye ikhetha ukukhetha ivoti xa kwenzeka ityiti. Inkokheli yee senate iquka umongameli wexesha elilawulayo ekungabikho kwe-vice-president, inkokheli ininzi inyuli amalungu ukuba aholele kwaye akhonze kwiikomiti ezahlukeneyo kunye nenkokeli encinci .
Amabini omabini-uxolo kunye nabancinci-nabo banesibhobho esinceda abavoti bee-senator kwiimigangatho yamalungu.
Amandla eSeneti avela ngaphezu kokubaluleka kwawo kuphela; Kwakhona kunikwa amandla athile kuMgaqo-siseko. Ukongezelela kwamaninzi amaninzi anikezelwe ngokubambisana kwizindlu zombini zeCongress, uMgaqo-siseko ubonisa indima yomzimba ophezulu ngokukodwa kwiCandelo le-1, iSigaba 3.
Nangona iNdlu yabaBameli inamandla okucebisa ukutshutshiswa komongameli ohleliyo, i-vice-president okanye amanye amagosa aseburhulumenteni anjengejaji "olwaphulo-mthetho oluphezulu kunye nabangalunganga," njengoko kubhaliweyo kuMgaqo-siseko, iNkundla yeSeti iyona jury kuphela xa inkohlakalo ihamba ityala. Ngenxa yesininzi sesibini kwisithathu, iSenate inokususa igosa kwiofisi. Abalawuli ababini, uAndrew Johnson kunye noBill Clinton, baye bavalelwa; bobabini bahlulwa.
UMongameli we-United States unamandla okuxoxisana ngezivumelwano kunye nezivumelwano kunye nezinye iintlanga, kodwa i-Senate kufuneka ibenzise ngokuvota kwi-voti yesibini ukuze kusebenze. Le yindlela yodwa ye-Senate yokulinganisa amandla omongameli. Bonke abaqeshwe nguMongameli, kuquka namalungu eKhabhinethi , abaqeshwe ngamagosa kunye nabaposisi kufuneka baqinisekiswe yiSenate, enokubiza abo batyunjwa ukuba bangqina phambi kwayo.
I-Senate iphinda iphande ngemiba yomdla kazwelonke. Kukho uphando olukhethekileyo lwemiba evela kwiVietnam yaseVietnam ukuya kulwaphulo-mthetho olulungelelaniswayo kwi- Watergate break-in kunye ne-cover-up.
I-More 'Chamber of Deliberate'
I-Senate iqhelekile ngokubanzi ngamagumbi amabini eCongress; ingqinisiso, impikiswano emgangathweni ingaqhubeka ngokungenammiselo, kwaye ezinye zibonakala ngathi.
I-Senators ingabonakalisa i-filibuster, okanye ilibale ixesha elongezelelweyo elenziwe ngumzimba, ngokuliphikisa ngokude; Indlela yodwa yokuphelisa i-filibuster yindlela yokuhamba, efuna ukuvota kwabama-60.
Inkqubo yeKomiti yeKomiti
I-Senate, njengeNdlu yabameli, ithumela iibill kwiikomiti ngaphambi kokuzihambisa phambi kwegumbi elipheleleyo; Kwakhona ineekomiti ezenza imisebenzi ethile engeyona imithetho. Iikomiti zeSethi ziquka:
ezolimo, ukondla, kunye namahlathi;
ibhanki, izindlu kunye nemicimbi yasezidolophini;
ishishini, isayensi kunye nokuthutha;
amandla kunye nemithombo yendalo;
indawo kunye nemisebenzi yoluntu;
ubudlelwane bamanye amazwe;
impilo, imfundo, abasebenzi kunye neepensheni;
ukhuseleko lwasekhaya kunye nemicimbi karhulumente;
imithetho kunye nokulawulwa;
shishini kunye nezoshishino;
Kukho neekomiti ezikhethekileyo ekuguga, ekuziphatheni, kwiingcaphephe kunye nemicimbi yaseNdiya; kunye neekomiti ezidibeneyo kunye neNdlu yabameli.
ICongress iyakuthintela ukuhlawula iYo
Yiyiphi iMimiselo Yombuso?
Umbulali onguMongameli uKristen Gilbert
Izithombe zeMonald Trump kunye neMemes
Indlela yokusebenzisa iinjongo
I-PGA Tour Valero I-Texas evulekile
Imiqulu Yomthandazo WamaSulumane
Umdlalo woLuntu oluSuku oluPhambili lwamaxesha onke
I-Auschwitz yokuThuthukiswa nokuPhulwa kweKampu
Ngaba 'Kukhona' 'Había' okanye 'Habían'?